2019-05-30 13:11:47 ,(30.5.2019) ကျွန်မတို့ #Countr…
(30.5.2019) ကျွန်မတို့ #Country_Job_Agency တွင် ကုမ္ပဏီကြီးများမှ လက်ရှိလို အပ်သော Position များကို
1. လသာမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #General_Manager M/F(5)posts
– Salary 800,000~1,000,000 Ks
– English4Skills, Computer Basic, Advanced Excel, သက်ဆိုင်ရာ Management (or) Diploma တစ်ခုခုရရမည်။
– Exp (5)yrs above
– Age (35~50) yrs
– တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရုံးပိတ်ရက် ပိတ်
– စိတ်ဝင်စားပါက (31.5.2019)ရက် စနေနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Thin Lai Ph;09-897668884)
2. ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ Engineer Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Engineer M(5) posts
– Salary 250000~300000 Ks
– Computer Basic, Auto CAD 2D/3D
– Age (23~28)yrs
– အလုပ်ချိန် (9း00~5း00)
– စနေ/တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်
3. မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်ရှိ FMCG Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– Salary 200000~250000 Ks
– စိတ်ဝင်စားပါက (31.5.2019)ရက် စနေနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Aye Aye San Ph;09-451811412)
4. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Japan စာသင်ကျောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Japan_Teacher F(3)posts
– ဘွဲ့ရ/ Japan N3
– စိတ်ဝင်စားပါက (31.5.2019)ရက် စနေနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Win Thuzar Ph; 09-404777933)
5. စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Purchaser F(5)posts
– Age (35) under
– Sunday/ Public Holidaysပိတ်
– စိတ်ဝင်စားပါက (31.5.2019)ရက် စနေနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Htoo Thinzar Ph;09-264446085)
6. ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Manual_Account F(5)posts
– Age (30)under
– စိတ်ဝင်စားပါက (31.5.2019)ရက် စနေနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Htoo Thinzar Ph; 09-264446085)
7. အလုံမြို့နယ်ရှိ Cafe’ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Office_Staff F(5)posts
– Salary 150000~180000 Ks
– Exp မလို
– Sunday/ Public Holidays Off
– စိတ်ဝင်စားပါက (31.5.2019)ရက် စနေနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Myo Myo Ph; 09-264692102)
8. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Computer_Operator M(5)posts
– Salary 160000~200000 Ks
– အလုပ်ချိန် (8:00~5:00)
– စနေနေ့ဝက်/ တနင်္ဂနွေ/အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်
– Uniform ရှိ/ Ferry ရှိ(လှိုင်သာယာ/အင်းစ်ိန်)
– စိတ်ဝင်စားပါက (4.6.2019)ရက် အင်္ဂါနေ့ မနက်(10း00)နာရီတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Yu Yu Ph;09-458315642)
9. ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ရွှေဆိုင်ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Staff F(5)posts
– Age (28)under
– တစ်ပါတ်တစ်ရက် ပိတ်
– Salary 150000~200000 Ks
– Age (28) under
– စိတ်ဝင်စားပါက (3.6.2019)ရက် တနင်္လာနေ့မနက်(10း00)တွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Yu Yu Ph;09-458315642)
#Country_Job_Company_Limited ပန်းခြံတာဝါ ၊(၆)လွှာ၊ အခန်း(၆၀၄)ဗားဂရာလမ်း၊ မြေနီကုန်း စမ်းချောင်းမြို့နယ် မှာ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်။ (မြေနီကုန်း မှတ်တိုင်မှာဆင်းရမှာပါ) #အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရုံးဖုန်းနံပါတ် 01 2306361, 01 2306362 , 01 516639, 09-404779959 , 09-404777933 များသို့လဲ တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့အထိ(စနေနေ့တစ်ဝက်)ရုံးဖွင့်ချိန် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်းစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
← 2019-05-30 11:13:41 ,#၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ (၈ မိုင်ရှ… 2019-05-30 13:28:33 ,HSE Officer –2P(M/F)Salary U… →